Marcelo Lippi oo dhowaan noqonaya Tababaraha ugu qaalisan Adduunka – Gool FM
Haaruun September 8, 2016
(Roma), 08 Sebt 2016 –Wargeysyada ka soo baxa Talyaaniga ayaa qoraya in Tababarihii hore ee xulka Qaranka Talyaaniga Marcelo Lippi lagu wado in uu ku noqdo Tababarenimada isagoo ku laaban doona kooxdiisii hore ee Guangzhou Evergrande ee waddanka Shiinaha.
Wargeyska ‘Corriere dello Sport’ iyo Wakaaladda ‘France Press’ ayaa qoray maanta in dhowaan tababare Lippi uu heshiis 3 sanadood ah u saxiixi doono kooxdiisii hore ee Guangzhou Evergrande, isagoo mushaar ahaanna saddexdaasi sano u qaadan doona 60 Milyan oo Euro.
Lippi waxa uu Guangzhou u horseeday inay laba jeer ku guuleysteen horyaalkii dalkaasi 2012 iyo 2014, halka sidoo kalena ay ku guuleysteen Koobka Horyaalka Asia 2013.
halkii xilli ciyaareed ayuu Lippi jeebka ku shuban doonaa 20 Milyan oo Euro, taas oo noqonaysa mid ka sarreysa mushaarka sanadlaha ah uu qaato tababaraha ugu qaalisan adduunka ee Manchester City, Pep Guardiola (17,7 Milyan oo Euro).
Mar tababare Lippi la weydiiyay waxa ka jira wararkani ayaa waxa uu yiri “Haa, warkani waa sax, waxaan ku fikirayaa in aan ku noqdo Shiinaha, waan ku raaxeystay waqtigeygii halkaasi”.
Ciyaaryahan Somalia oo garoommada ka maqnaan doona muddo 3 Toddobaad ah